Jose Mourinho oo sharxaad ka bixiyay sababta uu kabtan ku xigeenimada uga qaaday Paul Pogba – Gool FM
(Manchester) 28 Sab 2018. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa amaanay Paul Pogba inkastoo xiriirka ka dhexeeya labadooda uusan wanaagsaneen.
Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay inuu ku faraxsan yahay la shaqeynta laacibka reer France ee Pogba, wuxuuna ku dhawaaqay inuu qeyb ka yahay shaxda Red Devils kulanka West Ham ee horyaalka Premier League.
“Toddobaadkan, waan ku faraxsanahay shaqadiisa, gaar ahaan maalmaha Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista, tababarkii maanta wuxuu ahaa mid fudud”.
“Kooxda waxay u baahan tahay ciyaartoy cusub ee leh shaqsiyad heer sare ay ku ciyaari karaan, Pogba wuxuu leeyahay qaab ciyaareed uu ugu raaxeysan karo, sidaas darteed kulanka bari wuu ciyaari doonaa”.
Intaas kadib Jose Mourinho ayaa sharxaad ka bixiyay sababta uu kabtan ku xigeenimada kooxda Manchester United uga qaaday Paul Pogba.
“Wuxuu la mid yahay shaqsiyaadka kale, ma jirta cid cida kale kaga sareysa kooxda, hadii aan ku faraxsanahay shaqadiisa, dabcan wuu ciyaarayaa, hadii aysan sidaas ahayn ma ciyaarayo”.
Intaas kadib Jose Mourinho ayaa sheegay In xiriirka uu la leeyahay Pogba uu yahay mid aad u wanaagsan.
“Waxaan go’aansaday inaan bedelo go’aankeyga, waxaana ka wada hadalnay shaqaalaha farsamada, waxaan go’aansanay in Pogba uu ahaado kaliya ciyaaryahan kubada cagta isla markaana uusan noqonin hogaamiye”.
Diego Costa oo weerar culus ku qaaday macalinkiisii hore kooxda Chelsea Antonio Conte